Qaabka cusub ee loo bedelayo CL fasal-ciyaareedka 2024-25 & sida uu u shaqeeyo | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Qaabka cusub ee loo bedelayo CL fasal-ciyaareedka 2024-25 & sida uu u...
Qaabka cusub ee loo bedelayo CL fasal-ciyaareedka 2024-25 & sida uu u shaqeeyo
(Nyon) 10 Abriil 2022 – Tirada kooxaha heerka guruubyada Champions League ayaa kor u kici doonta min 32 ilaa 36 kooxood laga bilaabo fasal-ciyaareedka 2024-25 iyadoo isbedelladan ay ansixisay Uefa.
Sida ku cad qaabka cusub, koox kastaa waxay ciyaari doontaa 8 kulan halkii ay ka ahaan jirtey 6 kulan heerka guruubyada. Laakin waxaa meesha ka baxay qorshe ahaa in kooxo gaar ah la siiyo labo boos oo Champions League ah iyadoo lagu saleynayo qaab-ciyaareedkii & bandhiggoodii hore ee Yurub.
Sidee habkan cusubi u shaqeeyaa?
Koox kasta waxay ciyaari doontaa 8 kulan oo ay la kala ciyaarso 8 kooxood oo kala nooc ah, 4 gurigeeda ah iyo 4 ay dool tahay (away). Sideeda kooxood ee ugu sarreeya waxay u gudbi doonaan heerka bug-baxda, halka kooxaha 9-aad ilaa 24-aad ay dheeli doonaan kulamo kala bax ah oo laba lug ah si ay ugu soo baxaan.
UEFA ayaa intaa ku dartay in “isbeddellada qaabkan la midka ah sidoo kale lagu dabaqi doono Europa League (8 kulan oo heerka horeah) iyo Europa Conference League (6 kulan oo heerka hore ah) labadaba waxay sidoo kale ku jiri doona 36 kooxood”.
Jamciyadda Naadiyada Yurub (ECA), oo matasha in ka badan 240 naadi, ayaa sheegtay inay taageerayaan dib u habeyntan cusub ee ay samaysay UEFA.
Sidee loo qoondeeyey 4-ta boos ee cusub?
Afarta kooxood ee dheeriga ah ee lagusoo kordhiyey UEFA Champions League ayaa loo qoondeyn doonaa sida soo socota: Boos waxaa geli doonta kooxda kaalinta saddexaad kaga jirta horyaalka ee kaalinta shanaad kaga jirta qiimaynta UEFA.
Kursi waxaa la siin doonaa kooxda CL qaadda iyadoo la kordhinayo tirada kooxaha u soo bixi doona CL ee ka socda horyaalka kooxda CL oo laga dhigayo 5 kooxood waxa loo yaqaan “Champions Path”.
Labada boos ee kale waxaa lagu abaalmarin doonaa labada horyaal ee sanad-ciyaareedkii hore ugu bandhig wanaagsanaada CL dhanka natiijada, iyadoo sanadkan haddii arrintan la dhaqangelin lahaa ay qaadan lahaayeen Horyaallada EPL iyo kan Holland, halka sanadkii ka horreeyey ay qaadan lahaayeen Spain & Jarmanka.
Previous articleUkraine oo qarxisay doon ay Ruushku leeyihiin balse si dadban Turkiga farta ugu fiiqday (Daawo)
Next article”Wuxuu leeyahay 240 dhuumood oo mar qura la ridi karo!” – 2 dal oo Muslim ah oo sameeyey hub cajiib ah (Daawo)